Muxuu qorsheynayey Afrika kahor inta aan xalay lagu dilin QARAX is-miidaamin ah? - Caasimada Online
Muxuu qorsheynayey Afrika kahor inta aan xalay lagu dilin QARAX is-miidaamin ah?
Muqdisho (Caasimada Online) – Agaasimihii Radio Muqdisho weriye Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ku dhintay qarax is-miidaamin ah oo xalay ka dhacay inta u dhaxeysa isgoyska Jubba iyo taalada Daljirka Daahsoon ee magaalada Muqdisho.
Afrika ayaa qorsheynayey inuu dhowaan u baxo safar dibedda ah, si uu caafimaad iyo daweyn ugu qaado hooyadiis oo xanuunsan, sida uu sheegay Cabdiraxiim Ciise Caddow, oo ahaa agaasimaha qeybta shaqaaleynta iyo tababarada wasaaradda warfaafinta.
Cabdiraxiim ayaa qoraal uu soo dhigay facebook ku yiri “Saaxibkey Afrika Maalmahaan wuxuu u diyaargaroobaaye safar, wuxuu dalbaday visa, asaga iyo hooyadiis si uu daawo ugu qaado dalka dibaddiisa, wuxuu soo goostay Tikid, wuxuuna qaatay warqaddii fasaxa safarka, wuxuu wareejiyay xilkii agaasinka Radiyaha.”